Sida loogu daro faylasha fiidiyaha ipad | Wararka IPhone
Wararka IPad | | iTunes, Casharrada iyo buugaagta
Ku darista filimada iPhone-ka ama iPad-ka had iyo jeer waxay madax xanuun ku tahay dadka isticmaala badan. Xaddidaadaha ay iTunes nagu soo rogtay iyo in kaliya ay noo ogolaaneyso inaan ku darno filimada qaabkeeda waxay ka dhigeysaa isticmaaleyaal badan inay ka fogaadaan qaabkan, laakiin runtii waa nidaam aad u fudud oo dhakhso leh, oo leh faa'iidooyin badan oo ka duwan xulashooyinka kale ee "aan rasmiga ahayn". Waxaan ku sharaxeynaa fiidiyow ahaan sida aan ugu dari karno fiidiyowyada iPhone ama iPad iyada oo loo marayo iTunes iyo iyaga ku raaxaysan meel kasta.
1 Qaabka iswaafajinta
2 Ku hagaaji iTunes
Waa tallaabada ugu horreysa iyo wax dad badani aad ugu adag tahay. Runtii waa hab deg deg ah, oo fudud oo la samayn karo xitaa iyadoo la adeegsanayo codsiyo bilaash ah. Waxaan horey uga soo hadalnay Ivi ama iFlicks 2, barnaamijyada cajiibka ah ee Mac ee adiga kuu wada sameeya, ama HandBrakela heli karo bilaash ah Windows iyo Mac iyo natiijooyin aad u fiican. Daqiiqado gudahood waxaad filimkaaga gabi ahaanba la jaan qaadi kara iTunes-ka oo tayo la'aan.
Ku hagaaji iTunes
Marka fiidiyahaaga la keeno iTunes, hawsha isku dhafan ma noqon karto mid fudud. Kaliya waa inaad tagtaa tabka Fiidiyowga, dooro kuwa aad rabto inaad ku darto oo guji Isuduwaha (ama Dalbo). Mudo daqiiqado ah fiidiyowyadaadu waxay ku dhex jiri doonaan barnaamijka asalka ah ee barnaamijka 'Videos' si aad ugu raaxeysan karto iyaga khadka.
Nidaamku waa mid aad u fudud, laakiin si loo caddeeyo xitaa sida loo sameeyo, waxaan ku tusi doonaa fiidiyoow. Xusuusnow taas gudaha kanaalkayaga Youtube waxaan haynaa fiidiyowyo badan oo ku saabsan iTunes (iyo mowduucyo kale oo badan) oo kaa caawin kara wax badan si aad uga faa'iideysato qalabkaaga, xallinta shaki badan ama shaki gelinta waxyaabo aadan xitaa ogeyn inaad ku sameyn karto iPhone-kaaga ama iPad-ka. Dabcan waxaan ku dari doonnaa fiidiyowyo badan kanaalkeena waana aqbalnaa soo jeedimahaaga ku saabsan mowduucyada ama shakiga aad rabto inaad xalliso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iTunes » Sida loogu daro faylasha fiidiyaha iPad
Maalin dhaweyd waxaan raadinayey codsi aan ku fuliyo howshan (Ma aanan ogeyn jiritaanka gacan-qabsi). Waad ku mahadsan tahay maqaalka Luis.